Xanuunka Neck (Xanuun Neck) - Sababaha, ogaanshaha, daaweynta, jimicsiyada +
Xanuun qoorta (xanuun qoorta)
Qoorta oo xanuun iyo qoor xanuun ayaa saameyn ku yeelan kara qof walba iyo qof walba. Xanuunka qoorta iyo xanuunka qoorta ayaa saameyn ku yeelan kara awooda shaqada iyo tayada nolosha - iyo cillad la'aanta qoorta ayaa sidoo kale sababi karta madax-xanuun qoorta iyo dawakhaad. Halkan waxaad ka heli doontaa caawimaad wanaagsan. Xanuunka qoorta waa buuq sanadeed saameeya ilaa 50% shacabka Noorway sanad walba, marka loo eego tirooyinka NHI.
Sababo la xiriira duruufaha shaqo ee dysergonomic iyo waqti aad u badan oo ay ku qaataan kombuyutarada, kiniiniyada iyo taleefannada casriga ah - taas oo iyana horseedaysa dhaqdhaqaaq jir ahaaneed oo aad u yar - waa la saadaalin karaa in nambaradaasi ay sii kordhayaan sannadaha oo ay sidoo kale noqon doonaan dhibaato bulsho sii ballaadhan (wax runtii noqday tan iyo maqaalkan markii ugu horreysay la daabacay!).
Maqaalku wuxuu kaloo ku tusayaa jimicsiga iyo “tallaabooyinka degdegga ah” haddii qoortu gabi ahaanba gashay “is -goyn”. Xusuusnow inaad nala soo xiriirto Facebook haddii aad wax su'aalo ah ama ra'yi ah qabtid. Waxaan sidoo kale u mahadcelineynaa qof kasta oo maqaalkan la wadaaga warbaahinta bulshada waqti hore.
Hoos ugu rogo si aad u aragto fiidiyooyin tababar oo dheeri ah oo kaa caawiya qoortaada xanuun.
VIDEO: 5 Lebbiska Dharka Ah Oo Loogu Talo Galay Xanuunka Stiff Neck iyo Neck xanuun
Muruqyada murugada oo xanuun badan? Shantaas jimicsi iyo jimicsiga fidinta ayaa kaa caawin kara inaad ka furfuro garaacyada muruqyada qotto dheer ee qoortaada waxayna ku siin karaan dhaqdhaqaaq qoorta oo wanaagsan. Hoos guji si aad u aragto layliyada.
MUUQAAL: Jimicsiyada Awoodaha Garbaha oo Cilmiga Leh
Tababbarka dabacsan wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo lagu helo shaqo ka wanaagsan inta u dhexeysa garbaha garbaha iyo gobolka qoorta. Adoo ku sii xoogeysanaya garbaha iyo murqaha garabka, waxaad ka hortegi kartaa muruqyada qoortaada inay culeyska saaraan nolol maalmeedka walaaca leh. Barnaamijka jimicsiga waa in la qabtaa labo ilaa afar jeer usbuucii si ugu wanaagsan uguna wanaagsan.
Sidoo kale aqri: - Sida loo yareeyo murugada murqaha ee qoorta iyo garabka
Maxaan sameyn karaa xiitaa qoorta?
1. Jimicsi guud, jimicsi gaar ah iyo nashaad ayaa lagula talinayaa, laakiin ku joog xadka xanuunka. Laba socod maalin kasta oo ah 20-40 daqiiqo waxay u roon yihiin jirka iyo murqaha xanuun.
2. Goolal dhaliye / kubadaha duugista waxaan si xoogan kuugula talineynaa - gaar ahaan maadaama inta badan xanuunka qoorta ay u sabab tahay dheecaanka muruqyada iyo kala goysyada. Waxaa lagu heli karaa cabbiro kaladuwan si aad si fiican ugu dhufan karto xitaa qaybaha jirka oo dhan. Ma jiro caawin kafiican oo tan ka wanaagsan! Waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda (dhagsii sawirka hoose) - kaas oo ah shay dhammaystiran oo ah 5 calaamad dhibco / kubadaha duugista oo leh cabbirro kaladuwan:
Alaabada lagu taliyay ee xanuunka joojiya xanuunka
Iska Jir Baarista Xanuunka Luqunta oo Baadhitaan
Ha u ogolaan xanuunka qoorta inay qayb ka noqdaan nolol maalmeedkaaga. Iyadoo aan loo eegin xaaladdaada, xitaa haddii ay tahay mid leh shaqo jireed culus oo ka timid da 'yar ama shaqo xafiis badan oo fadhigiisu hooseeyo, waa kiiska in qoorta ay had iyo jeer ku guuleysan karto shaqo ka wanaagsan tan ay maanta tahay.
Taladeena ugu horaysa ee xanuunka qoorta waa in la raadiyo mid ka mid ah sedexda koox shaqo ee sida sharciga ah u fasaxay maamulka caafimaadka:
Oggolaanshahooda caafimaad ee dadweynaha waa natiijo ka timid hey'addu aqoonsi ay ka heshay waxbarashadooda aasaasiga ah waxayna kuu tahay badbaado adiga bukaan ahaan iyo inaad ka mid tahay faa'iidooyinka kale ee gaarka ah - sida ilaalinta iyada oo loo marayo Magdhowga Dhaawaca Bukaanka (NPE).
Waa amni dabiici ah in la ogaado in kooxahan shaqaalaysi ay ka diiwaan gashan yihiin qorshahan bukaan socodka - iyo, sida aan soo sheegnay, waxaan kugula talineynaa inaad barato / kula dhaqanto kooxaha xirfadda leh qorshahan la xiriira.
Labada koox shaqo ee ugu horeeya (chiropractor iyo therapist therapist) sidoo kale waxay leeyihiin xuquuq gudbin ah (sawirka sawirka raajada sida raajada, MRI iyo CT - ama u diritaanka rheumatologist ama neurologist markii loo baahdo baaritaanka noocaan ah) iyo fasaxa jirada (waxay soo sheegi karaan fasax fasax hadii loo maleeyo inay lagama maarmaan tahay).
Erayada muhiimka ah ee caafimaadka qoorta oo la hagaajiyay ayaa ku lug leh walaac dheeri ah oo nolol maalmeedka ah (ergonomic fit), guud ahaan dhaqdhaqaaq badan iyo fadhiyo aan caadi aheyn, iyo sidoo kale kordhinta diiradda la saaro jimicsiga caadiga ah.
Sababaha guud ee qoorta xanuun
Sababta ugu badan ee qoorta xanuunku waa isku-darka cillad la'aanta muruqyada iyo kala-goysyada. Tani waxay ku lug yeelan kartaa muruqyo adag, oo xanuun badan (oo badanaa loo yaqaan myalgias ama muruqyo xanuun), iyo sidoo kale qufulo wadajirka ah (oo badanaa loo yaqaan 'qufulada' ee afka) meelaha wadajirka ah ee ay saameysay.
Cilladaha waqtiga ka dib ama si kadis ah oo xad dhaaf ah ayaa ku dambayn karta dhaqdhaqaaqa iyo xanuunka oo yaraada.
Muruqyada muruqyada iyo muruqyada aan shaqaynin marna kaligood ma dhacaan, laakiin had iyo jeer waa qayb ka mid ah dhibaatada - sababtuna waa muruqyada iyo kala -goysyada oo aan iskood isu socon karin. Markaa marna ma aha "muruqa kaliya" - had iyo jeer waxaa jira dhowr arrimood oo kaa dhigaya inaad qabtid xanuunka dhabarka.
Sidaa darteed, waxaa aad muhiim u ah in la baaro oo la daweeyo muruqyada iyo kala goysyada labadaba si loo gaaro hannaan dhaqdhaqaaq iyo dhaqdhaqaaq caadi ah.
Sidoo kale aqri: Tan Waa inaad Ka Ogaato Waxyaabaha Aad U Baahantahay
Sababaha suurtagalka ah iyo sababaha xanuunka qoorta
Hurdo xumo (ma u baahan tahay barkin cusub?)
Culayska aan caadiga aheyn ee waqtiga
Jimicsi aad u yar iyo dhaqdhaqaaq maalin kasta ah
Xaalad adag ama qaab nololeed
Ciladaha suurtagalka ah ee qoorta xanuun
Halkan waxaa ah liis ku yaal baaritaannada suurtagalka ah iyo baaritaannada caafimaad ee sababi kara xannuunka qoorta.
Xanuun daran (markaad hurdada kaga kaco nabarro xanuun leh meel aad ku xir xiran tahay)
Faafinta Arteria carotid (jeexitaanka halbowlaha carotid)
osteoarthritis (Xirashada wadajirka ah iyo isbeddelada deg degga ah)
Cudurka Bechterew (Ankylosing spondylitis)
Cudurka qoorta (Neck Caabuq)
Carotidynia (caabuq ku dhaca halbowlaha carotid)
Spondylosis xubinta taranka dumarka
Nabarrada qanjidhada qanjidhada
Carotid stenosis (Dron carotid artery)
Kink ee garabka (Neck Kink)
Dhunkashada Cudurada (Mononucleosis)
Wadajirka qoorta (wuxuu ku dhici karaa dhammaan kala goysyada xubinta taranka minka laga bilaabo C1 ilaa C7)
Xanuunka dheeriga ah ee xubinta taranka dumarka
Inta u dhaxaysa Burburka Uubo
dhanjafka (xanuunka dhanjafku wuxuu kaloo sababi karaa xanuun qoorta)
kuus kuus muruqa / myalgia qoorta:
Qodobbada kicinta firfircoon xanuun marwalba ka keeni doona muruqa (tusaale musculus levator scapulae myalgi)
Dhibcaha jihada dambe ee dhibcaha waxay xanuun ka siisaa cadaadiska, waxqabadka iyo culeyska
Murqo xanuun qoorta
Murqaha murqaha qoorta
Neck slash / whiplash
Qoorta oo soo booddo (Waxay sababi kartaa xannuun la tixraaci karo iyadoo kuxiran xididka neerfayaasha)
Cudurka 'psoriatic arthritis'
Rubella (Dogs Red)
gaaray bowdada qoorta (tendinitis qoorta)
Dhaawaca Tendon qoorta
Stenosis laf-dhabarka ee qoorta
3 nooc oo kaladuwan oo xanuun qoorta ah
Xanuunka qoorta ayaa badanaa loo kala qaybin karaa 3 qaybood.
1. Xanuun garabka oo aan ilays lahayn
Sababta ugu badan ee xanuunka qoorta waa culays farsamo, kala-goysyo iyo murqaha murqaha. Kuwaani caadi ahaan way dhacaan, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la daweeyo kala goysyada iyo muruqyada labadaba si loo helo natiijooyinka ugu fiican marka loo eego ka soo kabashada calaamadaha iyo hagaajinta shaqada.
Tani waxay caawin kartaa dhakhtarkaaga loo yaqaan 'chiropractor'. Noocan ah murqaha muruqyada iyo cilladdu waxay sababi karaan waxa loogu yeero madax-xanuun afka ilmagaleenka, taas oo ah madax xanuun ka soo baxa qaab-dhismeedka qoorta.
Kuwani waxaay had iyo jeer u qaybsan yihiin qoorta oo xanuun daran iyo qoorta oo xanuun badan:
Xanuun qoorta oo daran
Qoorta qoorta oo deg deg ahi waxay u muuqan kartaa sidii inay dhacdo iyada oo aan sabab gaar ah ama dhaawac toos ahi jirin. Laakiin runtu waxay tahay in qoorta kadiska degdegga ah ay ka dhashaan sababaha muddada dheer iyo cilladaha murqaha qoorta iyo kala-goysyada.
- Xiisad walaac darteed, xoog saarid waqti dheer ah, xanaaq, buuq, xaaladaha nalalka oo liita
- Ma u baahan tahay muraayado (cusub)? Haddii aad indhaha isku xoqdo, waxaad si otomaatig ah u ciriiri doontaa muruqyada qoorta
- Xilal shaqo oo aan la jeclayn
- Shaqo joogta ah iyo hal dhinac ah (wax badan miyaad hor fariisataa kombuyuutarka?)
- Sifooyinka; gaar ahaan hal dhinac wuxuu ku dhacaa muruqyada xasaasiyadda xasaasiga ah, sida darawalada leh daaqadaha furan
- Meel jiif qaldan, ku seexashada fadhiga iyo / ama u seexashada dhinac keliya
Calaamadaha caamka ah ee qoorta oo dillaaca:
- Qoorta ayaa si lama filaan ah u xirta oo adkaata oo xanuun yeelata
- Ku soo toosi muraayad subaxdii
- Xanuunku badanaa wuxuu ku yaal meel cayiman oo qoorta ah
- Madaxaaga foorarso si aad uga fogaato xanuunka
- Way kugu adag tahay inaad madaxaaga u jeediso ama aad dhinaca eegto, adiga oo aan isla marna u wada jeedin jirkaaga oo dhan
- Xanuunku wuxuu noqon karaa mid daran, oo aan macquul aheyn in madaxa kor loo qaado ama madaxa hoos loo dhigo dhanka laabta adigoon gacmaha ka caawin
- Xanuunku sida caadiga ah wuu ka sii daraa 1-2 maalmood ee ugu horreeya, ka dibna si tartiib tartiib ah ayuu u fiicnaadaa
- Qaarkood si dhakhso leh ayey u bogsadaan, qaar kalena adkaanta ayaa sii socon kara toddobaadyo iyo bilo, ka dibna mar kale ayey ku soo noqdaan
Dhaawacyada qoorta ayaa dhaca marka qoorta loo dhigo xoog dibedda ah ama shil, qaababka dhaawaca ee caanka ah waxaa ka mid ah dhaawaca qoorta ka dib isku dhac xagga dambe ah, dhicista iyo dhaawacyada isboortiga, madaxa ama wajiga waxyeellada, iwm.
Calaamadaha kale ee sida caadiga ah la soo sheegay iyo soo bandhigida xanuunka qoorta:
- Caabuq qoorta ah
- Dhago la’aan qoorta
- Qoorta oo laga gubto
- Xanuun daran oo qoorta ah
- Naxdinta korantada ee qoorta
- Luqunta qoorta
- Dhajinta ama gujinta codka qoorta
- Qoorta qoorta
- Ciriiri qoorta ah
- Ku xidhan qoorta
- Qudhaanjo qoorta
- Murmur qoorta
- Kabuubyo qoorta ah
- Luqunta lux
- Qoorta la jeexay
- Daallan qoorta
- Ka xaday qoorta
- Nabarada qoorta
- Xanuun qoorta ah
- Qoor xanuun
Layliyo la xiriira: - Xanuun yar oo qoorta leh 5taan jimicsi ee wanaagsan
Xanuun qoorta oo daba-dheer
Haddii xanuunka qoorta uu sii socdo in ka badan 3 bilood, xanuunka waxaa loogu yeeraa mid daba-dheer. Xanuun daba dheeraada kadib dhaawaca qoorta waa caadi. Kuwo badan ayaa dabiici ahaan ka baqay inay qoorta dhaqaaqaan ka dib dhaawaca oo ku dhexdhaca goob wareeg ah oo leh dhaqdhaqaaq adag oo aan caadi ahayn si looga fogaado xanuun. Tani waa sidoo kale sababta aan muddada dheer loogu isticmaali doonin isku-buuqa qoorta ka dib dhaawacyada qoorta ee aadka u daran.
Dhaawacku wuxuu u gudbi karaa sawir xanuun murugsan:
- Xanuun qoorta
- Xanuun u dhexeeya garbaha garbaha
- Dhabar xanuun
U shucaac xanuun garabka iyo gacanta
Cirrid iyo kabuubyo gacmaha iyo faraha ah
- Madax xanuun
- Xanuun wajiga ah
- Feejignaanta oo yaraatay
- Daal fara badan iyo hurdo la’aan
Labada sababa ee ugu badan ee qoorta oo xanuun leh shucaac bukaanka da 'yar (<40 sano) ayaa loogu yeeraa soo dhicida makaanka iyo dhaawacyada isboortiga.
Bukaannada waayeelka ah (> 40 sano), fursadda soo noqoshada afka ilmo-galeenka way ka yar tahay, sababtoo ah cufnaanta jilicsan (nucleus palposus) ee maqaarka dhexdhexaadka ah ee sii adkeynaya da'da, taas oo horseedaysa fursad yar oo ah tirada gelatinous ee soo baxda. derbiga diaphragm-ka.
Xarig weyn, halkaas oo darbiga ku wareegsan dadbadan ay bilaabeyso in ay dhasho waxaa loo yaqaan soo dhicis.
Waa marka muuqaalkani ka dhashay cadaadis saaran xididka dareemayaasha ee u dhow inaan la kulmi karno xanuun ama astaamo (tusaale, jeexdin, gacmaha oo hoos u dhaca, iwm) hal ama labada gacmoodba. Xididka xididdada ee ugu badan ee ku dhaca soo-ifka xubinta taranka dumarka waa C7.
Sidoo kale waa in la sheegaa in muruqyada ciriiriga ah ee u dhow brachial plexus ay sababi karaan astaamaha noocan ah, laakiin ka dib sida caadiga ah ilaa xad kayar.
Haddii ay dhacdo soo-goynta ilmo-galeenka, chiropractor-gu wuxuu kaa caawin doonaa inaad ka takhalusto cadaadiska dareemayaasha ay saameysay, iyadoo loo marayo farsamooyinka loo yaqaanno goynta. Tani waxay gacan ka geysan kartaa dhexdhexaadka xanuunka iyo ka hortagga xaaladda neerfayaasha inay ka sii darto sababtoo ah cadaadiska joogtada ah ee dareemayaasha. Marxaladda degdegga ah ee xaaladdan 'cryotherapy' waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xaddido caabuq iyo xanaaq dheeraad ah oo ku dhaca xididka dareemayaasha, iyo talooyinka ergonomic ayaa sidoo kale la siin doonaa iyada oo laxiriirta waxa qoorta loo xayiro marxaladdan.
Shaqada muruqyada ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa qaab kala-fidin, kicinta daweynta dhibcaha, iyo sidoo kale tababbarka iyo jimicsiga guriga marka wejiga degdegga ahi dhammaado.
Qoorta loo yaqaan "slump neck" waxay ku dhici kartaa shilalka gawaarida, dhicitaanka ama dhaawacyada isboorti. Sababta qooxdu waa xawaaraha ilmo-galeenka ee degdega oo ay ku xigto isbadal deg deg ah.
Tan macnaheedu waa qoorta ma haysato waqti ay ku 'difaacdo' sidaas darteedna farsamadan meesha madaxa gadaal iyo gadaal looga tuuro waxay u horseedi kartaa dhaawac muruqyada, seedaha iyo muruqyada qoorta dhexdeeda.
Haddii aad isku aragto astaamaha neerfaha kadib shil noocan oo kale ah (tusaale ahaan xanuunka gacmaha ama dareenka ah hoos u dhaca gacmaha), isla markiiba raadso daryeel caafimaad.
Badanaa waa kuwa ku dhaca fasalada 1-2 ee natiijada ugu wanaagsan ka hela daaweynta bukaanka. Fasalada 3-4-aad, waxay noqon karaan, xaalada ugu xun, inay u horseedaan dhaawacyo joogto ah, marka waa muhiim in qofka qoorta ka dhaawacan uu si dhaqso leh u hubiyo shaqaalaha ambalaaska ama la tashiga qolka xaaladaha degdegga ah.
Sidee looga hortagaa cunaha?
Waxaa jira dhowr tallaabo oo kaa caawin kara inaad ka hortagto qoorta oo xanuun - oo ay ku jiraan:
Ha fadhiisan dhaxanta.
Dhaqdhaqaaqa joogtada ahi wuxuu horseedaa wareegga dhiigga oo wanaagsanaada iyo murqaha oo yaraada.
Raadso daaweyn jireed oo aad caawimaad uga hesho xanuunka qoorta.
Samee jimicsiga fiditaanka iyo xoojinta si joogto ah.
MR sawirka qoorta
Sawirka MR ee qoorta - Sawirka Wikimedia
- Kala duwanaanta caadiga ah ee sawirka MRI ee qoorta (ilmo galeenka ilmo galeenka), kala duwanaanta sagittal, T2 miisaan.
MRI qoorta - Qaybta Sagittal - Sawirka MRIMaster
Sharaxa Muuqaalka MR: Halkan waxaan ku aragnaa muuqaal kale oo muujinaya heerarka kala duwan ee afka ilmo-galeenka (C1-C7), lafdhabarta (spinosi, geeddi-socodka laf-dhabarka), xudunta laf-dhabarka iyo disc intervertebral disc.
VIDEO: MR Cervical Columna (MRI qoorta):
Sharraxa sawirkan MR: Waxaan aragnaa dherer dhererkiisu hooseeyo C6 / 7 oo leh feejignaan dheellitiran oo dhinaca midigta ah taasoo siinaysa xoogaa ciriiri ah xaaladaha neurophoramines iyo jacaylka xididdada xididada dareemayaasha Qalabka yar ee yar ayaa sidoo kale ka soo baxa C3 illaa C6, laakiin wax jacayl ah oo xididdada dareemayaasha ee heerarkan. Haddii kale boosas fara badan oo ku jira kanaalka laf-dhabarka. Majiro xanuun.
Markuu qoorta sababay xanuun xanuun: Cervicobrachialgi
Marka xididdada dareemayaasha ee hoose ee qoorta ay noqdaan qanjaruuf muruqyada muruqyada / myalgaas dartiis, hawlgab wadajirka ah oo daciif ah, dib u dhaca maqaarka iyo / ama calcifications ka dib isbeddelada xirashada, xanuunka daran wuxuu ku dhici karaa gacanta si la mid ah sida aad sciatica ugu heli karto dhabarka hoose. Tan ayaa la dhahaa ilmo galeenka
Markuu qoorta sababa madax xanuun: Madax xanuunka ilmagaleenka
Nooc madax xanuun ah oo badanaa sababa xiro qoorta sare, taas oo keenta madax xanuun, xanuun qoorta iyo murqaha ciriiriga ah ee qoorta kore.
Daaweynta Buug-gacmeedka: Saamayn caafimaad ahaan la xaqiijiyay oo ku saabsan xanuun joojinta qoorta
Daaweynta xanuunka loo yaqaan 'chiropractic treatment', oo ka kooban abaabul qoorta / istcimaal iyo jimicsiyo gaar ah oo guriga lagu sameeyo, ayaa saameyn caafimaad ku xaqiijisay kahortaga xanuunka qoorta. Daraasad dhowaan la daabacay oo lagu daabacay joornaalka caanka ah ee Annals of Medicine Gudaha (Bronfort et al, 2012) waxay ogaatay in qaabkan daaweyntu uu leeyahay saameyn wanaagsan oo la duubay marka la barbar dhigo daaweynta caafimaad ee noocyada NSAIDs (Daawooyinka anti-bararka ee aan dawooyinka lahayn) (2).
Daaweynta muxaafidka ah ee qoorta xanuun
Daaweynta muxaafidka ah waxaa loola jeedaa daaweyn badbaado leh - tani badanaa waxay ka kooban tahay daaweyn jireed qaabab kala duwan, tusaale ahaan. daaweynta muruqyada iyo daaweynta wadajirka ah. Laakiin sidoo kale waxaa jira habab kale oo badan oo daaweyn ah oo la isticmaalo.
Daaweynta gacanta ee qoorta xanuun
Sidii hore loo soo sheegay, lafopractor iyo daaweeye gacanta ayaa labaduba ah kooxaha shaqooyinka leh waxbarashada ugu dheer iyo ogolaanshaha dadweynaha ee ka imanaya hay'adaha caafimaadka - waana sababta ay daaweeyayaashan (oo ay ku jiraan jimicsiga jirka) inta badan u arkaan bukaanada badankood ee qaba murqaha iyo xanuunada wadajirka ah.
Hadafka ugu weyn ee daaweynta daaweyntu waa yareynta xanuunka, kor u qaadida caafimaadka guud iyo hagaajinta tayada nolosha adoo dib u soo celinaya waxqabadka caadiga ah ee nidaamka muruqyada iyo nidaamka dareemayaasha.
Xaaladda qoorta oo xanuun, takhtarku wuxuu labadaba ku daaweyn doonaa qoorta gudaha si loo yareeyo xanuunka, loo yareeyo xanaaqa iyo kordhinta bixinta dhiigga, iyo sidoo kale soo celinta dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee meelaha ay saameeyeen cilladda wadajirka ah - tani waxay noqon kartaa tusaale ahaan. lafdhabarta wadnaha, qoorta, garabka garabka iyo garabka wadajir. Markaad dooranaysid istiraatiijiyad daaweyn ah oo loogu talagalay bukaanka shakhsiga ah, takhtarka guud ee loo oggol yahay wuxuu xoogga saarayaa inuu arko bukaanka xaalad guud.
Haddii ay jirto shaki ah in qoorta xanuunku u sabab yahay cudur kale, waxaa laguu diri doonaa baaris dheeraad ah.
Daaweynta Buugga (laga bilaabo dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor' ama daaweynta dabiiciga ah) wuxuu ka kooban yahay dhowr habab daaweyn ah oo daaweeyaha badanaa adeegsado gacmaha si loo soo celiyo shaqadii caadiga ahayd ee kala-goysyada, murqaha, unugyada isku xirnaanta iyo nidaamka dareenka:
- Daaweyn wadaag ah oo gaar ah
- Farsamooyinka murqaha
- Farsamooyinka neerfaha
- Dejinta jimicsiga
- Jimicsi, talo bixin iyo hagitaan
Muxuu qabtaa xanuunka loo yaqaan 'chiropractor' ama daaweeyaha gacanta
Murqaha, wadajirka iyo xanuunka dareemayaasha: Kuwani waa waxyaabo uu takhtar jimicsiga ama daaweeyaha gacanta ku caawin karo kahortaga iyo daweynta. Daaweynta loo yaqaan 'chiropractic / therapy therapy' badanaa waxay ku saabsan tahay soo celinta dhaqdhaqaaqa iyo shaqada wadajirka ah oo laga yaabo inay ku yaraato xanuunka farsamada.
Tan waxaa lagu sameeyaa waxa loogu yeero sixitaanka wadajirka ama farsamooyinka khalkhalgelinta, iyo sidoo kale abaabul wada jir ah, farsamooyinka fidinta, iyo shaqada muruqyada (sida kicinta daaweynta dhibicda jirka iyo shaqada unugyada jilicsan ee qoto dheer) muruqyada ku lugta leh. Marka la kordhiyo shaqada iyo xanuunka oo yaraada, waxaa laga yaabaa inay u fududaato shakhsiyaadka inay ku lug yeeshaan nashaadaad jir ah, taas oo iyana saameyn wanaagsan ku yeelan doonta labadaba tamarta iyo caafimaadka.
Jimicsiyada, tababarka iyo tixgelinta ergonomic ee qoorta
Khabiir ku takhasusay murqaha iyo xanuunnada qalfoofku waxay, iyagoo ku saleynaya ogaanshahaaga, kuu sheegi karaan tixgalinta ergonomic ee aad u baahan tahay inaad ka hortagto waxyeelo kale, sidaas darteed hubinta waqtiga ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah ee bogsashada.
Ka dib marka qaybta xanuunku ku dhammaado, inta badan kiisaska waxaa sidoo kale lagugu meeleyn doonaa laylisyada guriga kuwaasoo waliba kaa caawin doona yareynta fursadda soo noqoshada. Marka ay jiraan xanuunno daba-dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la maro dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ee aad sameyso nolol maalmeedka, si loo garto sababta xanuunkaaga u dhacayo marar badan.
- Halkan waxaad ka heli doontaa dulmar guud iyo liistada layliyo aan daabacnay oo la xiriira ka-hortagga, ka-hortagga iyo gargaarka qoorta oo xanuunta, qoorta oo xanuunta, qoorta oo qoorta laga jaro, qoorta oo la isku beddelo, qoor-gooye / qoorta qoorta iyo baaritaanno kale oo la xiriira
Dulmar guud: Jimicsi iyo jimicsi loogu talagalay xanuunka qoorta iyo xanuunka qoorta
Sidookale Akhri: 4 Jimicsiyada Loogu talagalay adiga oo wata Whiplash / Neck Slang
4 Jimicsiyada adkeynta lugaha qallafsan
4 Jimicsiyada Yoga ee Xanuunka Luqunta
5 Jimicsiyo Gaar ah oo Adiga Adigoo Cudurka Qoorta ah
7 Layliyo ka dhan ah Luqunta liita
Alaabada lagu taliyay ee tababarka wax ku oolka ah
Xargaha-yaryar: Diyaarin 6 gogo 'knitwear ah xoogag kala duwan.
Sidoo kale aqri:
- Calool xanuun? Waa inaad tan ka ogaataa xanuunka caloosha.
- Xanuunka dhabarka?
NHI - Macluumaadka Caafimaadka Noorwiijiga.
Bronfort et al. Isbeddellada laf-dhabarka, Daaweynta, ama Jimicsiga Guriga oo La-talin ah Xanuunka Dhabarka ah iyo Xanuunka Dhabta ah ee Xanuunka Dhimirka. Maxkamad La Kala Qaaday. Qormooyinka Daawada Gudaha. Janaayo 3, 2012, vol. 156 Maya. 1 Qaybta 1 1-10.
Livingston. Daraasadda qoorgooyaha ee Task Force Task Force. Lafdhabarta 1999 Jan 1; 24 (1): 99-100. Web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9921601
Su'aalaha badanaa la is weydiiyo ee ku saabsan xanuunka qoorta
Xanuun ayuu ku dhacay c3 ka dib dhicitaankii. Maxaan ugu dhaawacayaa halkaas?
Xanuun ku dhaca wadajirka saddexaad ee afka ilmagaleenka (wadajirka qoorta) dhinaca midig, bidix ama labada dhinacba waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay cillad ka timaadda dillaacda dillaacda («quful«) Iyo muruqyada (myös) - inta badan waa isku-darka tan oo ku xanuuneysa C3.
Qoorta ayaa loo qaybiyaa 7 kala-goysyada waaweyn, laga bilaabo korka sare ee C1, hoosna loogu sii dhaadhacayo C2, C3, C4, C5, C6 iyo dhamaan jidka ilaa qaybta hoose ee makaanka afkiisa, C7. Markaad dhacdo, waxaa jiri kara wadhaf qoorta oo kicin kara nidaamka difaaca jirka halkaasoo aad ku aragto muruqyo isku soo uruuraya oo adkaanaya kala-goysyada muuqda - tani waa in laga hortago waxyeellada dhismayaasha aadka u jilicsan sida dareemayaasha iyo maqaarka dhexdhexaadka ah (saxannada jilicsan) inta u dhexeysa wareegyada).
Nasiib darro, jidhku ma laha "badhanka ka baxsan" si uu u joojiyo dareen -celintaan, sidaas awgeedna waxaan inta badan aragnaa in xanuunku sii jiri karo maalmo ama toddobaadyo ka dib dhicitaankii dhabta ahaa. Si loo soo gaabiyo waqtiga dhalmada, waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay daaweynta wadajirka ah, daaweynta muruqa, dhaqdhaqaaqa guud iyo jimicsiyada fidinta.
Miyuu calcification qoorta Maxaan sameeyaa
Calcification-ka qoorta wuxuu caadi ahaan ku lug leeyahay duugista caadiga ah iyo jeexitaanka iyo lafaha. Waxa ay tahay inaad sameyso waxay kuxirantahay hadba sida baahintu u egtahay - iyo inay sidoo kale sameenayaan cadaadis, tusaale ahaan kanaalka laf-dhabarka (tan waxaa lagu magacaabaa stenosis spinal cervical).
Guud ahaan, tababarka iyo jimicsiga ayaa lagula talinayaa, laakiin sidoo kale waxaan kugula talineynaa inaad la tashatid takhtar caafimaad si uu u qiimeeyo xanuunkaaga / ogaanshahaaga iyo inay kuu daweynayaan dariiqa ugu fiican ee daaweyntaada.
Talo soo jeedintayadu waxay u badan tahay inay ka soo horjeeddo jimicsiga / laylisyada oo ay weheliso daaweynta jireed iyo daaweynta wadajirka ah ee ay fuliso rugta caafimaadka dadweynaha.
Waxay leedahay xanuun iyo xanuun qoorta dhanka bidix. Maxaa noqon kara ogaanshaha cudurka?
Xanuunka garabka ayaa inta badan ka kooban dhowr arrimood oo ay ka kooban yihiin muruq iyo muruqyo wadajira. Tani waa sida caadiga ah xaaladaada markaad soo bandhigtay sidoo kale, markaa ogaanshaha suurtagalka ah wuxuu noqon karaa xanuun bidix-bidix xanuun / astaamo la xiriira myalgia afka ilmo-galeenka (durufun muruqyada qoorta).
Baadhitaannada kale ee suurtagalka ah waa qoorta oo jilicsan iyo jimicsi daran - in la magacaabo dhowr. Waxa suurtagal noqon doonta in si gaar ah loo sheego waxa ay noqon karto haddii aad noo sheegto haddii aad dareento inuu fadhiyo tusaale ahaan. inbadan qeybta kore ee qoorta, qeybta dhexe ee qoorta ama qeybta hoose ee qoorta - qaabkan waxaan kugu siineynaa talooyinka ugu fiican ee suurtogalka ah iyo tallaabooyin dheeri ah.
Waa maxay qoorta?
Markii laga hadlayo cagajuglaynta, tani badanaa waxay la xiriirtaa ka hadalka ka hadalka discs intervertebral disc, qaabdhismeedka jilicsan ee u dhexeeya vertebrae.
Qaybta jilicsan ee kuwan maqaar-wadayaasha ah ayaa dibedda u soo bixi kara, markaa wey sii weynaan karaan. Disc bulging is not the like disc prolapse - marka aan ka hadlayno soo noqoshada, waa gunta dhabta ah ee cufnaanta (nucleus pulposus) iyada oo loo marayo darbiga ku hareeraysan (annulus fibrosus).
Sida loo yareeyo xanuunka qof qaba soo jeedinta qoorta?
Si loo yareeyo xanuunka qof qaba qoorta prolapse, qofku waa inuu marka hore ogaadaa waxay tahay inuu sameeyo, tusaale ahaan meesha prolapse ku yaal iyo waxa xididka dareemayaasha ay riixayaan.
Khabiirka muruqyada (chiropractor) ama daaweeyaha gacanta ayaa kaa caawin kara baaritaanka caafimaad, iyo sidoo kale tixraaca baaritaanka muuqaalka si aad u hesho sawir ah sida ay prolapse u cadaadinayso dareemeyaasha. Khabiirkan oo kale ayaa waliba awood u yeelan doona inuu ku siiyo jimicsi loo habeeyay, xasillooni ergonomic ah, daweynta isgoyska iyo shaqada unug jilicsan oo dhammaantood kaa caawin kara yareynta xanuunka prolapse.
Hal shay oo muhiim ah ayaa ah inaad si dhakhso ah baadhitaan ugu sameyso oo laguugu soo wargeliyo waxa aad naftaada ku samayn karto adigoo kala bixinaya, tababar gaar ah iyo waxa aad ka heli karto daaweynta. Tallaabooyin dheeri ah, barkin dhejis ayaa lagu talinayaa (akhri: Madaxa barkinta si looga fogaado xanuun qoorta?). Xor baad u tahay inaad weydiiso su'aalo dheeraad ah qeybta faallooyinka ee hoose.
Dhaawac ka soo gaadhay qaybta sare ee qoorta madaxa. Maxaa sababi kara?
Xanuunka qaybta sare ee qoorta madaxa, dhinaca bidix, midig ama labada dhinacba waxay yeelan karaan dhowr sababood. Nasiib wanaag, sababta ugu badan murqaha qoorta adag (myalgia / myosis - waxaa habboon in suboccipitalis) muruqyada dhabarka kore (trapezius sare og levator scapulae) oo ay weheliso xannibaadyo wadajir ah (oo caan ku ah 'qufulka qufulka') kala-goysyada qoorta kore (doorbidayo C1, C2 iyo kala-goysyada C3 kuwaas oo dhaqdhaqaaqa yareeyay.
Isku-darka daaweynta wadajirka ah, daaweynta muruqyada iyo tababar la waafajiyay oo leh xoog iyo fiditaan labadaba ayaa ah daawada ugu fiican ee cudurrada noocaas ah - habkaas ayaad uga fogaan kartaa jirrooyinka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan xanuunka qeybta kore ee qoorta iyo dhabarka madaxa iyada.
Waxaan ku noolahay Dal (oo u dhow Gardermoen) waxaanan rabaa talobixin ku saabsan dhaqtarka gacanta (lafopractor, therapist manual or physiotherapist) ee aaggayga. Yaad kula talin laheyd
Malaayiin akhristayaal ah sanadkii, waxaan Vondt.net ka helnaa baaritaan maalinle ah halkaas oo dadku ay ku weydiistaan ​​talooyin iyo kooxda xirfadleyda ah ee ay dooraneyso markii la raadinayo daaweynta dhibaatooyinka muruqyada, dareemayaasha iyo kala-goysyada - markaan dhiibno talooyinkaan waxaan ku saleyneynaa afar shuruudood :
Cadayn ku saleysan: Xaruntu iyo rug caafimaadku waxay ku saleysan yihiin cilmi baaristii ugu dambeysay ee lagu daaweynayey cudurrada laabatada iyo muruqyada?
Moderne: Daaweyntu miyey wax ka qabataa labadaba sababaha iyo astaamaha hab guud - iyada oo lagu daaweynayo muruqyada iyo kala-goysyada, iyo sidoo kale laylisyada jimicsiga ee loo habeeyay qofka?
isku xirnaansho: Miyuu takhtarka iyo rugta caafimaad u adeegsadaa gudbinta khubarada xagga sawirka, dhaqancelinta iyo qiimeynta takhasuska? Mise iyagu waa dugsigii hore ee loo yaqaan 'dininosaur' oo leh raajo u gaar ah qolka dambe?
amniga bukaanka: Xaruntu waqti fiican ayey ku qaadataa baaritaanka iyo daaweynta? Mise waa 5 daqiiqo oo daaweyn loo diyaariyey bukaan kasta?
Taladayada ku saabsan aagaggaaga gudahood daaweynta jireed, maadooyinka kala duwan, daaweynta cirrhaafka / ciribtirka iyo qiimeynta ayaa ah Råholt Chiropractor Center iyo jimicsiga jimicsiga - xarun ku saleysan caddeyn, casri, iskuduwayaal isuduwaha taas oo diiradda saareysa baaritaanka iyo daaweynta dhameystiran.
Ma ku dhici karaa infekshan ku dhaca qoorta?
Caabuqa iyo infekshannada qoorta ku dhaca waa wax aan caadi ahayn, laakiin si dhif ah ayey u dhici karaan.
Waxaan ku xusuusineynaa in caabuq iyo infekshanku ay yihiin laba shay oo gebi ahaanba kala duwan - haddii aad isku aragto fal-celin daran oo barar leh oo ku saabsan horumarinta kuleylka, qandho iyo malax aagga ah, markaa waxaad u badan tahay inaad qabtid infekshan - waana inaad markaa u tagtaa GP-ga isla maalintaas si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo. iyo daaweynta.
Mid miyuu dawakhsan karaa qoorta darteed? Anigu waan xanuunsanahay oo waan dawakhsanahay.
Marka dawakhaad ay ka dhashaan muruqyada iyo kala-goysyada qoorta, tan waxaa lagu magacaabaa dawakhaad minka. Cervicogen waxaa loola jeedaa qoorta oo la xiriirta.
Jawaabta ayaa ah in qofku uu dawakhsan karo dartiis sababtoo ah myalgia iyo xannibaadaha wadajirka ah ee qoorta. Haddii ay jiraan xanuunno joogto ah, waa inaad la xiriirtaa rug caafimaad oo baaritaan iyo daaweyn laguugu sameeyo.
Anette Østberg wuxuu leeyahay,
Waxaan la halgamayay murqo xanuun / qallafsanaan qoorta, garbaha iyo dhabarka sare maalin kasta tan iyo bilowgii Febraayo. Waxaan dareemaa kacsanaan mar walba waxaana dareemaa inaan waligey si buuxda u nasan. Mararka qaarkood aad ayay u xun tahay in aanan u adkeysan karin in aan madaxa kor u qaado, waxa ay dareema in murqaha qoorta ay si buuxda u fashilmeen. Waxaan sidoo kale la halgamaa madax-xanuun iyo dawakhaad maalin kasta.
Waxaan sidoo kale la halgamaa hurdada, sababtoo ah waan jiifsadaa kacsanaa oo waxaan ku qaataa hurdo dheer waqti dheer maadaama aanan waligey helin boos hurdo fiican. Waxa aan dareemaa daalka marka aan kaco sida marka aan seexanayo iyo sababta oo kale. Hadda waxaan 100% ku jiray fasax jirro ilaa 15kii Febraayo.
Waxaan u joogay lafopractor qiyaastii laba jeer usbuucii tan iyo markii ay dhibaatooyinku bilaabeen, iyada oo aan wax horumar ah laga helin. Haddii aan dareemo fiicnaan maalin, waxaan u muuqdaa inaan ka sii xumaanayo sidii ay ahayd maalinta xigta. Waxaa la igu sameeyay MRI, mana helin natiijooyin la taaban karo. Waxaan sidoo kale aadday dhakhtarka, waxaan helay beddelka beddelka GP-ga nasiib darro. Waxa uu u maleeyay in aan shaqada aado, maadaama aan xanuun qabo dhib malahan haddii aan shaqeeyo ama aan guriga joogo, sidoo kale waxaan ku jiri karaa shaqada. Isagu gabi ahaanba ma xiiso gelin xanuunkayga waxana uu ku fikiray in aan cuno khudaarta qallafsan oo aan akhriyo sida loo helo nadaafad hurdo wanaagsan. Waxaan sidoo kale ka qaadnay shaybaar dhiig, iyada oo aan la helin natiijooyin la xidhiidha. Waxa uu sidoo kale u maleeyay in tani laga yaabo inay nafsiyan la xiriirto shaqadayda cusub, iyo in aan haysto walaac, walbahaar iyo niyad-jab.
Loo-shaqeeyahaygu sidoo kale wuu rumaysan yahay kan… Laakin, wax dhibaato weyn ah igama soo kulmin haba yaraatee. Hadda oo aan guriga joogo muddo aad u dheer, waa in la bixiyaa, ma jiraan wax laga naxo ama kadeedka halkan guriga… Dhanka kale, waxaan ka walwalsanahay oo aan ka walwalsanahay in tani aysan dhici doonin, way dhacdaa. ma dareemin inay jidhkayga dheer tahay. Barkintii waxaan u beddelay tempur, waxaan isticmaalay suuf kuleyl ah oo qoortayga saaran, waxaan iibsaday qalab duugis ah, oo saaxiibkayna waan u duugay sidoo kale, socod lugee, wareeg. iyo iskala bixin, isku day jimicsiyada yoga qaarkood.
Uma muuqato mid aad u caawinaysa, way nafisisaa inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa, laakiin waxa aan dareemi karaa in si aad ah loo garaaco ka dib waxaanan dareemaa dawakhaad waxaana igu dhaca madax xanuun ka dib dhaqdhaqaaqa. Waxa kale oo ay qaadataa qaar ka mid ah paracetamol, ibux iyo naproxen iyada oo aan la caawin. Waxa kale oo aad isticmaashay kareemka voltarol iyo kaniiniyada, iyo valerin forte si aad u nasato. Midna mid ka mid ah tani ma caawin.
Soooo .. tani waxay soo martay jid dheer, ma garanayo waxaan sameeyo hadda. Umana muuqato in daaweeyahaygu uu garanayo sidoo kale.
Waxaan runtii u baahanahay xoogaa talooyin fiican!
Taasi ma fiicna, Anette. Wax ma dhaceen ka hor bilawgii Febraayo? Shil, dhaawac (tusaale rabshad) ama dhicid? Mise si lama filaan ah ayey u timid?
Marka la eego tillaabooyinka aad ku samaysay guriga - tani waxay muujinaysaa inaad si dhab ah u xiisaynayso inaad ka soo raynayso. Waxa kale oo ay sheegaysaa qayb ka mid ah in dawooyinka xanuunka baabi'iya aanay ka shaqaynayn xanuunkaaga - si fudud uma fiicna.
Ma heshay jimicsiyo aad samayso - iyo talo gaar ah oo ku saabsan dareenka murqaha iyo wixii la mid ah?
Vidar Stenbekken wuxuu leeyahay,
14/09/2016 at 19:09
Hi! Waxa uu muddo dheer ka xanuunsanayay qoorta oo loo sheegay in ay jiraan sababo murqaha ah, laakiin sidoo kale waxay keentay quful wadajir ah. Caawin wanaagsan ka helay lafopractor in muddo ah, laakiin nasiib darro waa fadhiid.
Ma jiraan jimicsi fudud oo cajiib ah oo wanaagsan oo aad ku samayn karto guriga si ay u noqoto mid xasiloon oo jihada togan? Hadda waxaan haystaa dhibaatada ah inay mar walba dib u dhacdo. Waxay u egtahay inaad tan wax yar ku qabsanayso daawaynta iyo tababarka, laakiin kuma filna haddii aan sidaas u dhigo.
Waxa uu dareemaya in dhaqdhaqaaqu aanu ahayn mid dhamaystiran 100% iyo dhawaqyada qallafsan ee noocan oo kale ah ayaa badanaa dhaca marka la guurayo oo kaliya dhinaca bidix ee meesha qufulka wadajirka ah uu ku yaal. Qof ayaa sheegay in la tababaro murqaha qoorta oo qoto dheer oo ma jiraan jimicsi wanaagsan oo aan ku samayn karo guriga kuwaas oo fudud si aan u qabsado muruqyadan?
Thomas v / vondt.net wuxuu leeyahay,
18/09/2016 at 01:37
Nasiib darro, ma jiraan wadooyin gaaban marka ay timaado caafimaadka murqaha iyo wadajirka ee wanaagsan. Halkan waa inaad si nidaamsan ugu shaqeysaa dhaqdhaqaaqa korodhka nolol maalmeedka, boosaska shaqada ee aan joogtada ahayn iyo laga yaabee xitaa u tag lafopractor waqti ka waqti (maadaama aad sheegtay in aad hore u leedahay saameyn wanaagsan) - daaweynta jireed iyo muddada ay inta badan ku xiran tahay. ilaa inta aad la halgamaysay dhibaatadaada. Ma jiri doonto "xakameyn degdeg ah" haddii dhibaatadu ay sii socoto dhowr sano - markaa waa in sidoo kale la filayaa in koorsada daaweynta tusaale ahaan. xanuunka loo yaqaan 'chiropractor' wuxuu qaataa waqti ka dheer qoorta degdega ah ee qoorta oo dhacay shalay.
Dhibaatada ka jirta tababarka muruqyada qoorta qoto dheer ayaa ah in jimicsiyadaas ay yihiin kuwo caajis ah oo cajiib ah (oo ay ku jiraan garka labajibbaaran iyo tababarka isometric ee ka dhanka ah calaacalaha) - iyo 99% qof kasta oo iyaga sameeya ma samayn karaan waqti dheer ama si fiican ugu filan.
Waxaan kugula talineynaa inaad si fiican oo joogto ah u tababarto, gaar ahaan adigoo diiradda saaraya garbaha iyo guud ahaan. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale saameyn wanaagsan ku yeelan karto rullaluistemadka xumbo ee laf-dhabarta dhuunta oo ay weheliso fidinta qoorta.
Jimicsiga murqaha DNF waxaa badanaa loo isticmaalaa bukaanka Whiplash - waxaad ka heli doontaa tusaalooyin kuwan ah iyada.
Linda Asmundsen wuxuu leeyahay,
21/11/2016 at 02:55
Hello. Waxaan la dhibtoonayay qoorta sannado badan oo aan bararay, dhakhtarkaygu wuxuu u maleynayaa inay tahay soo-dhac. Laakin hadda xanuun baan ka dareemay luqunta, laakiin inta badan garabka midig, iyo sidoo kale waxay hoos ugu dhacdaa gacanta midig oo aan aniguna la halgamayo - oo aan dareemayo inay daciiftay? Maxay noqon kartaa?
Alexander v / fondt.net wuxuu leeyahay,
21/11/2016 at 07:49
Haddii aad qabtid qoorta iyo cududda xanuunka sanado badan, way caddahay in uu jiro xoogaa xanaaqa neerfaha / qanjaruufo xididada dareemayaasha. Oo sidaas awgeed waxaan u aragnaa wax la yaab leh in aan laguu soo gudbin baaritaanka MRI si loo xaqiijiyo tuhunka - markaad wax badan ka ogaato madow iyo caddaan, waxay u sahlan tahay daaweeyaha iyo bukaanka labadaba inay dejiyaan barnaamij daaweyn iyo tababar wax ku ool ah.
Baaritaannada suurtagalka ah waa qoorta oo soo noqnoqota oo leh kalgacal xidid (xididka ama xididdada dareemayaasha ee xanaaqa ayaa go'aaminaya sida xirfadaha dareenka / dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa) ay u saameeyaan cudurka TOS syndrome ama xanuunada muruqyada myofascial iyo xannibaadaha wadajirka ah ee isku dhafan oo xanaaqa neerfaha qoorta ama ka soo horjeeda plexus brachial. Waxay u badan tahay inay tahay isku darka xanaaqa / qanjaruufo xididdada dareemayaasha C5, C6 iyo C7.
Haddaan si badheedh ah u idhaahdo... qofna lama qaadin Baaritaanka MRI xataa?
Sidee loo hagaajiyaa dabeecadda? Layliga si loo helo boos wanaagsan. Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
17/07/2014, kl. 18:28
[…] Xanuun qoorta […]
29/08/2013, kl. 14:13